Apple hanangana ivon-data vaovao any Danemark | Vaovao IPhone
Apple dia mikasa ny hampiasa vola any Danemark indray hananganana foibe angon-drakitra vaovao ao amin'ny firenena, foibe angon-drakitra izay ampiasain'ny angovo azo havaozina irery. Ity fampahalalana ity dia nambaran'ny minisitry ny tontolo iainana ary avy eo nohamafisin'ny Reuters tamin'ny lohan'ny Apple ao amin'ny firenena, Erik Stannow.
Ity no ivon-drakitra faharoa hananganana an'i Apple ao amin'ny firenena. Ny voalohany dia ao Viborg, saingy tsy hiasa izy io raha tsy amin'ny faran'ity taona ity. Ny ivon-angona vaovao dia hatsangana ao Aabenraa, akaikin'ny sisin-tany Alemanina ary manodidina ny 200 kilometatra atsimon'i Viborg.
Ny daty andrasana amin'ity ivon-data vaovao ity ho tonga amin'ny Internet dia ny telovolana faharoa amin'ny taona 2019, na dia izany aza fahafantarana ny faharetan'ny Apple sy ny parsimony rehefa manamboatra zavatra izy, tena azo inoana fa ny asa tsy ho vita hatramin'ny faran'ny taona 2020 na ny fiandohan'ny 2021. Ity ivon-data vaovao ity dia ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny sehatry ny fandefasan-kafatra Apple, Siri, Apple Maps ary ny App Store ho an'ny mpampiasa rehetra amin'ny ankamaroan'ny Eropa.
Toa izany ao amin'ny Denmark dia mandray an'io karazana fampiasam-bola io izay miteraka asa marobe, tsy mandritra ny fanamboarana ihany fa rehefa ampiharina koa. Na izany aza, tany Irlandy, indrindra ao Athenry, Apple dia hatramin'ny 2015 fifampiraharahana momba ny fananganana ivon-data vaovao ao amin'ny firenena, fanamboarana izay mitentina 900 tapitrisa $ an'i Apple.
Ity ivon-data vaovao ity dia izao nalemy tamin'ny fitsarana miandry ny fikajiana ny fahasimban'ny tontolo iainana mety hateraky ny fametrahana an'ity ivon-data ity, ivon-tahiry izay daty hanombohana azy dia ny fiandohan'ity taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple hanangana ivon-data vaovao any Danemark
Hanangana serivisy web ho an'ny solosaina ny sehatra fandefasan-kafatra, Google Allo